Ohere Job: Onye nrụpụta Frontend maka Observatory nke Ego - AfricaArXiv
Ohere Job: Onye nrụpụta Frontend maka Observatory
bipụtara Stefan Skupien on 5th March 2021 5th March 2021
Dịka onye nrụpụta n'ihu ma ọ bụ onye nwere teknụzụ nwere ahụmịhe otu, a na-akpọ gị nke ọma ka ị nye aka na ịmecha oghere na-emeghe na oghere data
'Observatory maka ego maka ndi nyocha Africa na ndi na emebe iwu.
Ihe ederede di na https://research-db-docs.netlify.app/
Anyị na-achọ enyemaka iji tinye ihu ihu maka ụdị ngwaahịa pere mpe (ihe dị ka 10h) ma nabata ntụnye na ntụnye ọ bụla. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịnye ọtụtụ ihe gbasara ụgwọ ọnwa, anyị nwere ụfọdụ ego iji kweta mbọ a.
Stefan Skupien (Germany) na Dian Kayton (South Africa)
Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye aka na ọrụ a ma nwee ikike achọrọ biko jupụta n'ụdị dị n'okpuru.
Urdị url: https://forms.gle/hL6juEbZN2HyM9cKA
Categories:	ọkwaNjikọ AkaOpen Access
Tags: isi datafrontend onye nrụpụtaegoọrụpịa